Indlela yokubopha inqabana yabantwana kunye neenaliti zokudibanisa, itlasi yeklasi. Umntwana wesibhakabhaka esisiqalo esibophelelwe ukubopha, imifanekiso, isiteji ngeyiteyithi
Ingqungquthela nenqabileyo yomntwana ebophayo ayinzima. Sinikela ingqalelo kwiklasi yeklasi ekwenzeni ngezandla zakho isiqhekeza esingavamile ngendlela yesitywina. Ndiyabulela kwisitebhisi ngamanyathelo kunye nesakhiwo, inkqubo yokubamba iya kuba lula kwaye inomdla ngakumbi. Ukuqhagamshela inqanawa enjalo kumntwana oqalayo unako.
Intambo: uboya (omhlophe) i-Novita -70g (kwi-100g / 270m), i-acrylic (ibhontshisi) Adelia "Ivia" - 70g (kwi-100g / 200m)
Intambo yokusetyenziswa: 140 g.
Izilwanyana: iisetyhula ye-4.5 kunye no-2.5 ​​(ii-2 ii-pcs.)
Inaliti yokuthunga nge-eyelet enkulu
Ubukhulu bale nqalo: 10,5x90cm.
Ubunzima bokubamba: 1cm = 2.5 iphe
Indlela yokubopha inqabileyo yokuqala kwinqanaba lomntwana ngomyalelo wesinyathelo
Ingqungqutyana yabantwana iqulethe izingxenye ezi-6: umzimba wekati enee-paws, i-collar-loop, umsila, i-muzzle, iindlebe ezimbini.
Qalisa ukudibanisa kwi-paws:
Kwiesetyhula ukudibanisa iinaliti Nombolo 4,5, siqokelela i-loops ezi-5 kunye nemigca e-4 edibeneyo. Siphinde sithungele imigca yokuqala, kwakhona, ngobuso. Ngomqolo ngamnye omtsha sisusa i-loop yokuqala, i-final yenze i-purl.
Ngomqolo we-4 faka ii-loops ezi-2 uze udibanye enye iindidi ezine. Sandisa umqolo ukuya kuma-loops angu-9, sidonsa imigqa emi-5 kwaye sifaka intambo ebomvu. Sadibanisa imiqolo emithathu yobuso, ii-4 imigca - i-purl. Ngoko, sidibanise ukuya kwii-28 ​​imiqolo, imibala ehlukile.
Siqokelela ii-loops ezongezelelweyo - oku kuya kuba yinkxwabo yesitywina, sinqumle imicu, siqhubela phambili le nxalenye (i-paw kunye ne-8 loops) kumgca kunye kunye neefowuni ezifanayo kunye nomgaqo ofanayo kunye wokuqala, sidibanisa unyawo lwesibini.
Sifika kumqolo we-16 kwaye sidibene.
Ngoku sidibanise isiseko senqabana-phinda umzobo oqaqambileyo amaxesha amane. (Jonga umzobo)
Icebo: qiniseka ukuba xa utshintsha umbala webala, imicu ehlukehlukeneyo iboshwe kwinqweba lesiseko, ngaphandle koko baya kuhamba ngeenxa zonke kwimigca yomveliso ogqityiweyo.
Sithumela i-9n., Vala iNyoka, -phakathi, sidibanise i-9n elandelayo.
Emva koko umyalelo womsebenzi ufana neentambo zangaphambili, kuphela kwisithombe esibuko: asifaki, kodwa sinciphise - 9n., 7n., 5n - vala umgca.
Siphindela emlenzeni wesibini - kwaye sinokuwukhulula.
Ngomgama we-12 cm ukusuka kwisiseko seqabunga (kungekhona izicwangciso zeenyawo!), Ukusuka ecaleni, kwiphini yesibini 2, 5, siphakamisa izikhonkwane ezingama-6 size sidibanise umgca we-28 cm ubude, sitshintsha iphethini nganye emine imiqolo. Emva koko thungula i-collar-loop eyenziwe ngokukodwa kwiindawo ezimbini - ukusuka kumqolo we-diagonally ukuya kwisiseko se-paws, ukusuka phambili-ngaphesheya ngaphaya kobubanzi besikrazo. Jonga umfanekiso.
Ngalinye icala kwicala, ukusuka kwinqanaba elingemuva, kumgama we-6 cm ukusuka kwisiseko, pha kamisa i-loops ezili-7 kwi-number inombolo ye-2.5 kwaye udibanise, ubeke enye iphethini ukuya kumqolo engama-20, wongeza ii-loops ezi-2.
Kwimiqolo engama-26 - sinyuka ngama-2 ngaphezulu. Sazidibanisa de kube ubude bomsila buyi-14 cm.
Sivala iinqwelo ezinamanyathelo amathathu.
Siqokelela iintambo ezi-12 zomgca omhlophe.
Ukusuka kwimigangatho e-4 esiyongeza kuyo ngamnye umgca we-1 loop ukuya kwi-18p., Sibopha i-4disks kwaye siqala ukuhla.
Emva koko vala ii-hinges kumanyathelo amathathu. Umbhobho kufuneka ube ne-convex encinane. Ngokukhawuleza uyifake umtshini, umlomo uze ukhwebe kwikhola.
Icebo: kungcono ukuthunga umbhobho omhlophe ngemicu emdaka - oku kuya kwandisa umqobo okhethekileyo kumfanekiso wekati.
Siqokelela izinto ezili-9 zomgca omhlophe, sidibanisa imiqolo emine, sitshintshela kumdaka kwaye sinciphise i-loops ezimbini.
Emva koko, kumqolo we-10, sinciphisa iingubo ezi-2 ngaphezulu, kumqolo we-12 - ii-2pets kwaye uvale umqolo.
Sula iindlebe zethu phezu kombhobho.
Sifaka amehlo ekati kunye "neentloko" kwimilenze.
Unokongeza isaphetha kwikhola okanye udibanise igama lomntwana.
Kwaye ngoku, ikratshi lethu silungile!
Esi sikhombi esinekhwele sinokuguqulwa kwiinguqu ezininzi: ukubopha ngendlela yeklasiki, ukuhamba phezulu kwikhola okanye ukubonga kwi-collar-collar ekhethekileyo, ugqoke ngomgaqo we-tie. Kule meko, indawo "yekati" iya kuhlala ihlukile. Bonisa ukucinga kwaye nceda abantwana bakho banezinto ezingavamile, izinto zangaphambili ezidibeneyo nezandla zabo.
I-fashionista encinci: sidibanise i-summer ye-beret enentombazana ekhonjiweyo
Umlutha wehlobo: sifunda ukudibanisa isikhwama esinefashini ehlobo
I-Pharyngitis: izigulane zabantu
Ukutya kwi-gallbladder. Yintoni engenakudliwa ngesifo se gallbladder?
IHoroscope ngo-2010 - i-scorpion ibhinqa
I-honey pie kunye nama-alimondi